I-Pressfarm: Thola Izintatheli Ozozibhala Ngokuqala Kwakho | Martech Zone
I-Pressfarm: Thola Izintatheli Ozozibhala Ngokuqala Kwakho
NgoLwesibili, ngoJulayi 15, i-2014 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi, sinemali engenayo yangaphambi kwemali, iziqalo zangaphambi kokutshalwa kwezimali ezisicela usizo lokumaketha futhi akukho lutho esingakwenza ngoba abanaso isabelomali. Sivame ukubanikeza izeluleko ezithile ezibandakanya ukumaketha ngezwi lomlomo (ama-aka referrals) noma ukuthatha imali encane abanayo futhi bathole inkampani enkulu yezobudlelwano nomphakathi. Njengoba okuqukethwe nokukhangisa okungenayo kudinga ucwaningo, ukuhlela, ukuhlolwa namandla - kuthatha isikhathi esiningi kakhulu futhi kudinga izinsizakusebenza eziningi zokuqala.
Sesike sabhala phambilini indlela yokufaka iphimbo futhi kanjani ukungagxili i-blogger noma intatheli. Ukubhala iposi elifanele, elichazayo nentatheli kuyindlela enhle yokuzama ukuthola ukuqala kwakho. Abanye abantu bakholelwa ukuthi lokhu kumane kungogaxekile kodwa akunjalo. Njenge-blogger yezobuchwepheshe bokumaketha, ngilindele ngokuphelele, ukuthanda nokusebenzisa izingqimba cishe nsuku zonke ukuthola imikhiqizo nezinsizakalo ezintsha ongabhala ngazo kule bhulogi. Okusemqoka ukuthi iphimbo lakhiwa kanjani nokuthi liyahambisana yini nezilaleli zami.
Indawo yezindaba isayithi lokuqalisa elisha eliqongelele ama-imeyili kanye nama-akhawunti we-twitter wezintatheli kuyo yonke i-Intanethi ebhala ngeziqalo. Okuhle kunakho konke, akubhalisi okubizayo. Kungamadola ambalwa nje ukufinyelela lonke uhlu lwezintatheli.
Iseluleko sami kuma-startups - qamba umlayezo womuntu siqu kunoma yikuphi ukushicilelwa ofisa ukukufinyelela. Yigcine ibuthuntu ize ifike ephuzwini, ungenzi ihaba ukuthi uyinto enkulu elandelayo, thumela izithombe-skrini ezimbalwa zesixhumanisi kuvidiyo abazoyibuka… bese ulinda. Sicela ungalokhu uwabhala kaninginingi… lokho kuyacasula nje. Uma befuna ukubhala ngawe, babezoqala ngqa ukuxhumana nabo.
Tags: i-blogger bioiphimbo le-bloggerthola ama-blogger ku-twitterthola izintatheli ku-twitterintatheli biointatheli iphimboi-pitchumshini wokucindezelaqalisaizintatheli zokuqalaukuqala kokuthengisaizincwadi zokuqalisa
Inselele Yokumaketha Amasilosi nokuthi Ungawagqashula Kanjani